“ အမိအဖပြုစုသူကို သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်း၏ ”
ရဟန်းတို့ မိမိအိမ်၌ အမိအဖတို့ကို ပူဇော်သော
အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် ဗြဟ္မာ ရှိသည် မည်ကုန်၏၊
“သူတော်ကောင်း”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပါဠိဘာသာမှာ “သပ္ပုရိသ”လို့ခေါ်တယ်၊ “သန္တော ပုရိသော သပ္ပုရိသော”ဆိုတဲ့အတိုင်း ငြိမ်သက်အေးချမ်းသောသူ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။
မေး - ကဿပဘုရားရှင် လက်ထက်က ရဟန်းတပါးသည်
အနှစ်နှစ်သောင်း ရဟန်းတရားကို အားထုတ်ခဲ့ သော်လည်းသေခါနီး၌ မြက်ပင်တို့ကို မတော်တဆ နှုတ်မိသော ၀ိနည်းပြစ်ကိုအမှတ်ရ၍ ဘုရားနှစ်ဆူကြား
ကာလပတ်လုံး တိရိစ္ဆာန် နဂါးဘ၀ ဖြစ်ရခြင်း၊
လူတွေ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲလို့တရားချစ်ခင် သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ သိဖို့လိုတယ်နော်၊ လူတိုင်းလူတိုင်း နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ရမယ့် “တစ်နေ့သောအချိန်” ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲ? သေခါနီးအချိန်ပေါ့။ လူတိုင်းလူတိုင်း မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူး၊ တစ်နေ့ကျတော့ ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ စိတ်အားအငယ်ဆုံး၊ စိတ်ဓာတ်အကျဆုံး အချိန်လို့ ဆိုလိုတယ်။
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်။
မိဘကို ...ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်မလဲ ?
လောကမှာ တာဝန်တွေရှိပါတယ်။တာဝန်ကျေတဲ့သူဟာ ကျက်သရေ ရှိပါတယ် ။
တာဝန်မကျေတဲ့သူဟာ ကျက်သရေ မရှိပါဘူး။
ဒါဟာ - ဘုရားဟောပါ။
■ တာဝန်ဆိုတဲ့ စကားလေးဟာ ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ တည်ဆောက်လိုသူတွေ ရဲ့ နုလုံးသားထဲမှာ အစဉ်သဖြင့် သန္ဓေတည်သင့်နေတဲ့ စကားလေးပါ။
ရှင်ရဟန်းမပြုထိုက်သူ သုံးကျိတ်နှစ်ယောက် ( ၃၂-ယောက် )
တို့ဟာ ငါးပါးသီလမြဲသော ကုသိုလ် အာနုဘော်ကြောင့် ==
ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို အကျိုးရှိအောင် ကုသိုလ်ဖြင့် ဘ၀နေနည်း။
အကုသိုလ် မှ ကုသိုလ်ပန်းတိုင် သို့
အကုသိုလ် ဖြစ်တိုင်း စိတ်ဆင်းရဲ နေရမယ်ဆိုရင်တစ်သက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲနေ ရတော့မှာပါ၊
သာသနာဟာ အားလုံးရဲ့ ထောက်ရာ တည်ရာ အားကိုးရာပါ။ကိလေသာ မကင်းသေးတဲ့
ပုထုဇဉ်ဘဝမှာ အကုသိုလ်ကတော့ ပြုမိကြမှာပါပဲ။
လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲ။
အပါယ်လေးပါးဆိုတာက ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသုရကာယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပါယ်ဆိုတာက (အပါယ) ဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကနေဆင်း သက်လာတာပါ။ (အပါယ)မှာ (အပ+အယ) ဆိုပြီးနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ အပ= ကင်းခြင်း၊ အယ= ကုသိုလ်တရား၊ သို့မဟုတ် ချမ်းသာ။ နှစ်ပုဒ်ပေါင်းလိုက်တော့ ကုသိုလ်တို့မှကင်းခြင်း၊ ချမ်းသာတို့မှ ကင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အပါယ်လေးဘုံးသားတို့မှာ
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ။( ဦးပညာသာမိ)
“နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာများ ရင်းနှီးပြီးသား၊ ရဖူးပြီးသား ဖြစ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးတိုင်း၊ ဘာသာရေး အခမ်းအနားများရှိတိုင်း
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:00 AM2comments:
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ နောက်ဆုံး မှာကြားခဲ့သောစကား ***
ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို အကျိုးရှိအောင် ကုသိုလ်ဖြင...